Khuraafaadkii Amazons | Safarka Absolut
Isabella | | Greece
Qiyaasta caanka ah, Amazons waxay ahaayeen geesiyaal geesiyiin dagaalyahano ah oo ka soo dagaalamay Beershiya ama Giriiggii hore oo qaansooyinkooda fardooley ku ganay. Waxaa jiray halyeeyo badan oo iyaga ku saabsan iyaga oo in badan oo ka mid ahi isweydiiyeen in wax run ahi ku jiraan iyaga.
Haddii aad sidoo kale waligaa is weydiisay isla su'aashaas, qormada soo socota waxaan kaga hadli doonaa khuraafaadkii Amazons, cidda ay ahaayeen, halka ay ka yimaadeen iyo waxa aan ka ognahay.
1 Yey ahaayeen Amazons?
2 Amazons ma jireen?
3 Muxuu sheegayaa quraafaadkii Amazons?
4 Yey caabudayeen Amazons?
5 Maxay yihiin Amazons-ka ugu caansan?
Yey ahaayeen Amazons?
Sheekada ku saabsan Amazons ee nagu soo degtay waxay u dhigantaa quraafaadka Griigga. Sida ay sheegtay, Amazons waxay ahaayeen dad aad u qadiim ah oo dagaalyahan ah oo ay xukumaan isla markaana ay sameeyeen dumarka oo keliya.
Griiggu waxay ku tilmaameen inay yihiin geesiyaal soo jiidasho leh laakiin naagaha khatarta badan leh ee dagaalka badan. Waxay u maleynayeen inay ku noolaayeen gumeysi go'doon ah oo caasimaddiisu ahayd Themiscira, sida uu sheegayo Herodotus, oo ah magaalo deyr leh oo ku taal waxa hadda noqon lahaa waqooyiga Turkiga.
Sida uu sheegayo taariikhyahankan, Amazons waxay xiriir la yeesheen ragga Scythian oo jacayl ayey u qaadeen iyaga laakiin ma aysan doonaynin inay ku ekaadaan nolosha guriga, sidaa darteed waxay ku abuureen bulsho cusub bannaanka taranka Eurasia halkaasoo ay ka sii wadeen dhaqammadii awowayaashood. .
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira wax-ka-beddello yaryar oo ku saabsan sheekooyinka laga sheego Amazons. Tusaale ahaan, Sida laga soo xigtay Strabo, sannad kasta Amazons waxay la jiifsadaan ragga deriska ah si ay u tarmaan una sii wadaan khadka. Hadday gabadh dhalaan, ilmuhu wuxuu la kori lahaa iyaga sidii mid kale oo Amazon ah. Dhinaca kale, haddii ay ilmo dhalaan, waxay ku soo celiyaan ragga ama, xaaladdii ugu xumayd, way ka tageen ama u hureen.
Qorayaasha sida Paléfato, Amazons weligood ma jirin laakiin waxay ahaayeen rag lagu qalday dumarka maxaa yeelay waxay xiireen gadhka.
Amazons ma jireen?
Muddo dheer, khuraafaadka Amazons waxay ahayd intaas oo kaliya: halyeey. Si kastaba ha noqotee, 1861 aqoonyahankii caanka ahaa ee Johann Jakob Bachofen ayaa daabacay qoraal kor u qaaday shakiga laga qabo jiritaankooda isagoo cadeeyay in Amazonsku ay dhab yihiin oo bini aadamnimadu ku bilaabatay matooriyad ahaan.
Waqtigan xaadirka ah, cilmi baarayaal dhowr ah ayaa ku doodaya in khuraafaadka Amazons ay yeelan karto aasaas dhab ah. Dhamaadkii qarnigii XNUMXaad, necropolis waxaa laga helay meel u dhow xadka u dhexeeya Kazakhstan iyo Russia, halkaas oo laga helay haraadiga haweenka la aasay hubkoodii.
Helitaanka fallaadh qalooca oo ku jirta jirka haweeney sida muuqata ku dhimatay dagaalka ayaa ah mid aad u naxdin badan. Sidoo kale lafaha lugaha foorarsaday ee gabar dhalinyaro ah oo kahadashay nolol faras.
Baadhitaannadii kala duwanaa ee la sameeyay waxay muujiyeen in haweenku ahaayeen reer Scythians, oo ah qabiil reer miyi ah oo jiray muddo kun sano ah oo ku beegan xilliyadii hore ee Griiga (XNUMX - XNUMX qarniyo dhalashadii Ciise kahor). Qeybaha ayaa isku raacay: hijradoodii dadka reer Scythian waxay gaareen Turkiga maanta, halkaas oo sida ku xusan sheekada quraafaadku ay ka qaybqaadan lahaayeen Dagaalkii Trojan. Xaqiiqdii, waxaa la sheegaa in halyeeygii Griigga Achilles uu lahaa duel dagaalkii Trojan ee ka dhanka ahaa Penthesilea, oo ahayd boqoraddii Amazon ee Ares.
Waxaa lagu kala soocay waxqabadkeedii badnaa ee Troy intii lagu jiray hareeraheeda ka hor inta Achilles uusan ka adkaan adoo mindi laabta ka haya. Markay arkeen inay dhimatay, Achilles waxaa layaabay quruxdeeda waxayna ku aastay qarka webiga Scamander.
In kabadan seddex meelood meel dumarka reer Scythian ee laga dhex helay xaafado kala duwan ayaa lagu aasay hubkoodii qaar badanna waxay lahaayeen dhaawacyo dagaal, sida ragga oo kale. Tani waxay muujineysaa inay la dagaallami lahaayeen ragga ragga iyo calaamadahaas aasaas ahaan khuraafaadkii Amazons ayaa laga heli karaa.
Muxuu sheegayaa quraafaadkii Amazons?
Khuraafaadka Amazons waxay u badan tahay buunbuunin dhab ah oo ay sameeyeen taariikhyahanno Griig ah sida Herodotus oo doonayay inuu siiyo sheeko gaar ah dad dagaalyahanno heer sare ah. Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan inay si fudud u ahayd hadal sarbeebeed oo dagaallamayaashii Scythian, ee ku caanbaxay adduunka soo jireenka ah awoodda ay u leeyihiin toogashada qaanso iyo xakamaynta faraska fuushan.
Ereyga amazon wuxuu ka yimid Giriigga "amanzwn" oo macnaheedu yahay "kuwa aan laabta lahayn." Tani waxay tilmaamaysaa ficilkii ay Amazonsku ku sameeyeen gabdhihii markay dhasheen, kaas oo naasaha laga jaray si marka ay qaangaaraan ay si fiican u maamuli karaan qaansada iyo waranka.
Markaan fiirino shaqooyinka farshaxanka ee Amazons ay matalaan, ma aragno calaamadaha dhaqankan maxaa yeelay had iyo jeer waxay la muuqdaan labada naas inkasta oo midigta sida caadiga ah loo daboolay. Sawir gacmeedka, Amazons waxaa matalayay ladagaalanka Griiga ama dhaawacay kulamadaas kadib.
Dhinaca kale, Amazons waxaa la sheegay inay aasaaseen magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Efesos, Smyrna, Paphos, iyo Sinope. Caqiidada Griigga duulaanka militariga ee Amasku wuu badan yahay waxaana loo matalay inay yihiin cadawga Griigga.
Sheekooyinkani waxay si joogta ah uga sheekeeyaan halganka u dhexeeya boqorada Amazon iyo geesiyaal Griig ah, tusaale ahaan dagaalkii Penthesilea ee Achilles ee Dagaalkii Trojan ama labada dhinac ee Hercules ee ka dhanka ah Hippolyta, walaashii kii hore, oo qayb ka ah mid ka mid ah laba iyo tobankiisii ​​shuqul. .
Waxaa sidoo kale la sheegay in Amazons ay ka soo jeedaan Ares, ilaaha dagaalka, iyo magaca 'Harmon'.
Yey caabudayeen Amazons?
Sidii la filaayey Amasaanku waxay caabudi jireen ilaahadda Artemis ee ilaah uma caabudin. Waxay ahayd gabadhii Zeus iyo Leto, Apollo mataantiisii ​​mataanaha ahayd iyo ilaahadii ugaadhsiga, xayawaanka duurjoogta ah, bikradnimada, gabdho, dhalasho. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu ku muteystay yareynta cudurrada haweenka. Marka loo eego halyeeyada, Artemis waxay u adeegtay hage halgamayaashan aan caadiga ahayn sababtoo ah qaab nololeedkooda.
Amazons waxaa loo aaneeyay dhismaha macbudkii weynaa ee Artemis, in kastoo aysan jirin caddeyn lagu kalsoonaan karo oo tan ku saabsan.
Maxay yihiin Amazons-ka ugu caansan?
Penthesilea- Boqoradda Amazon oo ka qeyb qaadatay dagaalkii Trojan iyadoo geesinimo weyn u leh dagaalka. Wuxuu ku halaagsamay gacanta Achilles oo Antianira ayaa kala wareegay carshigii. Waxaa la sheegay inuu alifay nambarka.
cadhada diid: Waxaa la sheegaa inuu amray in la jarjaro ragga markay dhashaan maxaa yeelay curyaanka ayaa jacaylka wanaajiyay.
Hippolyta: walaasha Penthesilea. Wuxuu haystay suun sixir ah oo awooddiisu siisay isaga inuu ka awood roonaado dagaalyahannada kale ee dagaalka.
Melanippe: Hipólita walaasheed. Hercules ayaa la sheegay inay afduubatay iyada oo bedelkeeda xoriyadeeda ay dalbatay suunka sixirka ee Hippolyta.
Otrera: wuxuu jeclaa ilaaha Ares iyo hooyada Hipólita.
Myrin: Laga adkaaday Atlantiyadii iyo ciidankii Gorgons-ka. Wuxuu kaloo xukumay Liibiya.
Talestria: Boqoradda Amazon waxaana la sheegay inay sasabatay Alexander the Great.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Khuraafaadka Amazons
Meelaha ugu wanaagsan ee lagu quusto Morocco
Harooyinka waawayn ee Ameerika